Nge-7 kaJuni ngeZodiac-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-7 kaJuni iZodiac yiGemini-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Nge-7 kaJuni iZodiac yiGemini-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac kaJuni 7 yiGemini.
Uphawu lweenkwenkwezi: Amawele . Olu phawu lwe-zodiac luthathelwa ingqalelo ukuba nefuthe kwabo bazalwa nge-21 kaMeyi-nge-20 kaJuni, phantsi komqondiso weGemini zodiac. Oku kubonisa unxibelelwano, ukubonakalisa, iintlanganiso ezinkulu kunye neenjongo.
Inkqubo ye- IGemini Constellation ngeenkwenkwezi eziqaqambe kakhulu ukuba yiPollux isasazeke kwi-514 yeedigri zesikwere phakathi kweTaurus ukuya eNtshona kunye neCancer ukuya eMpuma. Ububanzi bayo obubonakalayo buyi-90 ° ukuya -60 °, le yenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini zodiacac.
E-Girisi ibizwa ngokuba yi-Dioscuri kwaye e-France igama linguGémeaux kodwa imvelaphi yesi-Latin yomqondiso we-zodiac kaJuni 7, amawele aseGemini.
Uphawu olwahlukileyo: Sagittarius. Olu luphawu ngqo ngqo kwisangqa se-zodiac ukusuka kumqondiso we-Gemini zodiac. Iphakamisa uxolo kunye nokwamkelwa kwaye ezi zimbini zithathwa njengezenza ubudlelwane obukhulu.
Ukuziphatha: Imfono. Kutyhila ukungangqinelani kunye nokubekeka esweni kubomi babo bazalwe nge-7 kaJuni kunye nendlela abaphupha ngayo ngokubanzi.
Indlu elawulayo: Indlu yesithathu . Oku kuthetha ukuba iiGeminis zinefuthe kunxibelelwano, ukuhlangana kwabantu kunye nohambo olubanzi. Le ndlu ikwalawula izakhono zonxibelelwano kunye nokunxanelwa ulwazi oluboniswe ngonxibelelwano lwasentlalweni.
Umzimba olawulayo: Imercury . Olu dibaniso lubonisa ubulumko kunye nethemba. Imercury ilawula imeko engqongileyo yabamelwane. Imercury ikwamele ubulumko baba bantu bomthonyama.
uphawu lwe-zodiac lwe-Agasti 27
Isiqalelo: Umoya . Eli lilungu labo bayila kwaye babandakanye ubomi babo ngokudibanisa yonke into kunye. Kuthiwa izokunceda abantu abazalwe phantsi kwe-7 ye-zodiac kaJuni kwaye ichaphazela ubudlelwane babo nezinye izinto, umzekelo ngokudibana nomlilo, iyayitshisa imeko.
Usuku lwethamsanqa: uLwesithathu . Ukulawulwa nguMercury ngalo mhla kufanekisela ingqondo evulekileyo kunye nobukrelekrele kwaye kubonakala ngathi kunokubona okufanayo ukuhamba kobomi babantu baseGemini.
Amanani anethamsanqa: 4, 7, 11, 14, 20.
Ulwazi oluthe kratya ngoJuni 7 Zodiac ngezantsi ▼
I-Tiger kunye ne-Dragon Love ukuhambelana: Ulwalamano oluzinikeleyo
Uphawu lweZodiac lwangoSeptemba 18
virgo kunye capricorn ubuhlobo ukuhambelana
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoNovemba 23
NgoJanuwari 14 ukuhambelana kweempawu zodiac